Vanopfurikidza mwero vachidyidzana neISIS muMozambique
Mutungamiri webato rinopikisa reMavambo Kusile Dawn uye vaimbova munyori mukuru weSADC Doctor Simba Makoni vanoti zvakakosha kuti nyika dzemuSADC dzipindire muhondo iri muMozambique iyo yaurayawo chimwe chizvarwa cheZimbabwe VaNyasha Mugwagwa.
VaMakoni vanoti chimwe chinangwa chakaumbirwa SADC chaive chekubatsirana munguva yehondo seiri muMozambique parizvino yaona vanhu vakawanda kusanganisira vana vadiki nemadzimai vachipondwa nevanopfurikidza mwero vanotsigira chikwata cheIslamic State kana kuti ISIS.
Doctor Makoni vanoti vatungamiri venyika dzemuSADC vanogona kunge vakanonoka havo asi hapana chakaipa kuti vatumire mauto ikozvino.
Vanotiwo nhaurirano pakati pevatungamiri venyika dzemuSADC hadzisi kunyatsoburitswa pachena kuti vanhu vazive kuti ndeapi matanho avari kuda kutora.
VaMakoni vakatungamira SADC kubva muna 1983 kusvika 1993. vatungamiri veSADC vakasangana kuMozambique mazuva mashoma adarika vakabuda nechisungo chekuti vatumire chikwata chenyanzvi dzechiuto kuti dzitange gadziriro yekuti vapindire muhondo iyi.
Bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika raburitsa mashoko ekuti VaMugwagwa vainge vachinzi vakashaika kuMozambique pakarwiswa nzvimbo yavaishandira vakatovigwa nekuti mutumbi wavo wainge watoora. Vanonzi vakaurayiwa nevamwe vanhu gumi nevaviri. Asi rinoti riri kushanda neMozambique kuti afukunurwe avigwe zvakanaka.
Mumashoko kuvatori venhau, mhuri yaVaMugwagwa yati mufi aive nemakore makumi matatu nemasere ekuberekwa uye ainge asiri kuzivikanwa kuti ari kupi kubva musi wa28 Kurume pakarwiswa nzvimbo yaaigara nevanopfurikidza mwero muMozambique.
Nzvimbo yakarwiswa inonzi weWentworth Camp, muCabo Delgado. Mhuri yaVaMugwagwa inoti vave kuyedza kuunza mutumbi wavo kumusha asi zvichatora nguva. VaMugwagwa vaishanda pahotera yeRemote Site Solutions muMozambique.
Hurukuro naDoctor Simba Makoni